OEM ODM Qoyaanka Anti-Gabowga Maaskaro Eye Eye Patch Qurxinta OEM & ODM
OEM ODM Qoyaanka Anti-Gabowga Maaskaro Eye Patch
Magaca badeecada: kareem indhaha oo tayo leh oo loogu talagalay wareegyada mugdiga ah, bacaha indhaha, laalaabku, dejinta iyo xoojinta --- oo leh noocyo kala duwan oo dhir ah.
[Waxyaabaha saafiga ah] 10 ml / pc
[Foom] xaashi suuf ah + Liquid
1 Baako / Bac
Carnosine, Camellia Sinensis Extract, Centella Asiatica Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract Extract Caleen, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Polygonum Cuspidatum Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Wareega Chamomilla (Matricaria) Ubax
Gabowga, lidka-duuduubka, qoyaanka, dejinta, iyo adkeynta.
Carnosine: Waxaa laga soo saaray sunta shinnida waxayna leedahay awood antioxidant xoog leh, taasoo dib u dhigi karta gabowga maqaarka.
Carnosine waxay ka hortagtaa waxyeelada xagjirka ah ee bilaashka ah ee maqaarka ee uu sababo sigaarcabku. Xagjirnimadan bilaashka ahi waxay dhaawacdaa maqaarka in ka badan inta ilayska qorraxdu waxyeeleeyaan.
1) Codso 2-3 jeer usbuucii hal mar, 1pair halkii mar, 15-20 daqiiqadood markasta.
2) Kahor isticmaalka: Ku qaado tijaabada xasaasiga ah gacmaha gadaashiisa.
3) Inta lagu guda jiro isticmaalka: Si fiican u nadiifi una tirtir maqaarkaaga hareeraha indhaha.
4) Ka dib isticmaalka: Si tartiib ah u duug maqaarkaaga isha si ay ugu sii ahaato nuxurka hadhaaga ah inuu si fiican u nuugo, ka dib markaad hoos u dhigto maaskarada.